Nearby Share Apk Download Ho an'ny Android [Nohavaozina 2022] | APKOLL
Nearby Share Apk no fampiharana Android tsara indrindra, izay manolotra fiasa marobe amin'ny toerana kely dia kely. Manolotra anao hihazona ny hafainganana fanodinana ny fitaovanao, ny fitantanana ny fisie, ny fizarana rakitra tsy andoavam-bola, ary ny endri-javatra maro hafa sy mahatalanjona.
Araka ny fantatrao fa misy rindranasa hafa, izay manolotra ireo serivisy ireo saingy tsy misy ny fampiharana izay manome maimaimpoana ireo serivisy rehetra ireo. Noho izany, mijanona miaraka aminay raha te hahafantatra endri-javatra mahavariana kokoa amin'ity rindranasa ity ianao satria hizara azy rehetra izahay.
Topimaso momba ny Apk Nearby Share
Izy io dia rindrambaiko Android maimaimpoana, izay atolotry ny Google LLC. Izy io dia novolavolaina mba hamela ny mpampiasa hifehy ambony amin'ny fitaovana Android. Raha mampiasa Android efa ela ianao dia fantatrao fa rehefa elaela dia manomboka mihemotra ireo fitaovana Android anao.
Izany dia noho ny junk fotsiny izay eo amin'ny fitaovanao. Ao amin'ny fitaovana Android, ny junks dia midika hoe ny sisa tavela amin'ny rakitra, antontan-taratasy ary fampiharana, izay tsy ampiasaina amin'ny ankapobeny fa mahatonga ny mpanodina, hiasa bebe kokoa. Noho izany, manomboka tara izy rehefa elaela. Noho izany dia manolotra anao izy ireo hanaisotra ireo kininina sy horonan-tsary, sary ary olon-kafa tsy ilaina ireo.
Izay mahatonga ny fikirakiranao haingana kokoa ary miasa kokoa izy io. Ny fikarohana haingana ny fisie dia azo alaina ho anao rehetra koa, amin'izay ahitanao izay rakitra, horonan-tsary, feo ary rindranasa ao amin'ny fitaovanao. Araka ny fantatrao dia misy fomba maro samihafa hahitana rakitra, izay tsy manakiana ihany koa fa ny fomba miadana.
Ny fizarana an-tserasera dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hizarana ireo rakitrao sy data-nao. Noho izany, manolotra fizarana eo akaiky eo ihany koa ianao, ahafahanao mizara horonan-tsary, fisie ary maro hafa. Mila mifandray fotsiny amin'ireo fitaovana hafa ianao, amin'ny fampiasana fampiharana mitovy, ary avy eo ianao dia afaka mizara data haingana kokoa noho ny hatramin'izay.
Tsy manambara mialoha ny amin'ny ho avy isika, fa misy zavatra hitranga amin'ny minitra manaraka. Indraindray ny toerana diso amin'ny fitaovana Android anao dia mampiahiahy anao momba ny angona manan-danja. Fa mba hampihenana an'ity zavatra ity dia manome fidirana mivantana amin'ny Google Drive na tahiry rahona hafa izy.
Mila mandefa ireo rakitra sy antontan-taratasy manan-danja amin'ny Cloud fotsiny ianao. Tsy misy olona mety hanakorontana amin'ny angon-drakitrao. Noho izany, ny antontan-taratasinao sy ny rakitrao dia azo antoka ny hidirana aminao irery amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Mila fifandraisana Internet fotsiny ianao hahazoana azy ireo.
Mila misintona ny Google Nearby Share fotsiny ianao ary mametraka azy amin'ny fitaovanao hidirana amin'ireo fiasa rehetra. Raha misy karazana olana amin'ny fisintomana ity rindranasa ity dia afaka mifandray aminay ianao. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
anarana Hitan'ny Apk akaiky
Anaran'ny fonosana com.google.android.apps.nbu.files
Endri-javatra lehibe an'ny Apk Nearby Share
Raha nizara saika ny endri-javatra sy serivisin'ity fampiharana ity izahay, fa raha heverinao fa tsy nahatratra ny sasany tamin'izy ireo izahay dia azonao zaraina amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany koa. Nefa fantaro fa hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe izahay.
Tantano ny fitahirizana rakitra
Fampirimana an-tserasera Fizarana rakitra amin'ny mpampiasa hafa
Esory ny Junks amin'ny fitaovana
Fitaovana Android manatsara
Famerenana amin'ny rahona, alefaso amin'ny tahiry Cloud ny angona
Ahoana ny fomba fampidinana ny fampiharana akaiky?
Raha misintona ny Android Android akaiky dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store. Fa raha te-hisintona avy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny. Eo an-tampon'ny sy eto amin'ity pejy ity no misy azy. Tsindrio izany ary miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fisintomana.
Mba hametrahana ny fisie Apk amin'ny fitaovanao Android dia mila manova fanovana sasany ianao. Tsy sarotra ny fanaovana azy, fa ho anao rehetra kosa dia hizara ny fizotran'ny fametrahana amin'ireo dingana etsy ambany izahay. Araho ny dingana ahafahana mametraka fametrahana tonga lafatra.
Nearby Share Apk no fampiharana Android tsara indrindra, izay manolotra fiasa marobe ao anatin'izany ny fizarana rakitra, Esory ny fako, ary maro hafa. Manolotra ny endri-javatra tsara indrindra maimaim-poana. Ankafizo àry ny fampiasana azy.
Mitsidika hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Tools Tags Fizarana Google eo akaikiny, Hitan'ny Apk akaiky, Hizara Fizarana eo akaikiny Post Fikarohana
1 hevitra momba ny "Fizarana Apk eo akaiky eo ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]"
Febroary 1, 2021 amin'ny 2: 27 am